Ndege nyowani kubva kuTel Aviv kuenda kuMorocco, Bahrain, Saudi Arabia, UAE - uye kukura
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Ndege nyowani kubva kuTel Aviv kuenda kuMorocco, Bahrain, Saudi Arabia, UAE - uye kukura
Airlines • nhandare yendege • Bahrain Kuputsa Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Egypt Kudzokorora Nhau • Hurumende Nhau • Israel Breaking News • Jorodhani Kuputsa Nhau • Marokero Kuputsa Nhau • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Trending Now • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kutungamira kubatanidza Tel Aviv nenhandare dzendege muUAE, Morocco, Saudi Arabia neBahrain zvichawedzera kufamba uye kushanya kunosvika kuMiddle East.
Nyika yevaIsrael yakave yakakura kwazvo nemutungamiri weUS Trump achitaurirana chibvumirano cherunyararo nenhamba iri kukura yenyika kuMiddle East neGulf Region.
America Kutanga ndiyo sirogani yeMutungamiri weU.S.Trump uye nzira dzekutengesa zvombo sezvo zvichitarisirwa nyika dzese idzi dzave kuzobvumidzwa kuwana zvombo zvemauto kubva kuUS Izvi zvakanakira hupfumi hweUnited States asi zvakare zvine njodzi kana zvikaitwa nekukurumidza uye ne chinangwa chekukunda sarudzo yeUS.
Pakutanga, zvichitevera chiziviso chakaitwa neMutungamiri weUS Donald Trump yechibvumirano cherunyararo pakati peIsrael neUnited Arab Emirates, chipangamazano mukuru weWhite House, Jared Kushner, akaburitsa pachena kuti nyika mbiri dzechiArabhu dzakabvuma kuvhura matenga kuti vafambe nendege kuenda nekubva kuIsrael, kusanganisira Bahrain, iyo yakagadzirirwa kujoina kusaina kwechibvumirano cheUAE-Israeli.
Marokero neIsrael zvakagadzirirwa kumisa yakananga nendege senzira yekugadzirisa hukama hweArabhu neIsrael, iyo Jerusalem Post Zvinonzi musi weMugovera.
Chirevo ichi chakauya sechikamu cheArab-Israeli yekumisikidza mabasa yakatangwa nehutongi hwaTrump mushure mekuwana chibvumirano cheUAE neIsrael. Kusainwa kwechibvumirano kunofanirwa kuitirwa kuWhite House nekukurumidza Chipiri chinotevera.
Musi wa15 Nyamavhuvhu, Times yeIsrael yakashuma, ichidoma vakuru veUS vasingazivikanwe, kuti Morocco ichava nyika inotevera yeArabhu kugadzirisa hukama neTel Aviv, mushure meUAE. Kunyangwe hazvo Morocco isina hukama hwepamutemo neIsrael, kune hukama hwekushanya nekutengeserana pakati penyika mbiri idzi. Uye zvakare, maMoroccan maJuda ndiyo yechipiri pakukura nzanga yechiJuda muIsrael, mushure mavaRussia maRussia, vanopfuura vanhu miriyoni imwe.
NeChitatu, mukuwasha waTrump uye chipangamazano mukuru weWhite House, Jared Kushner, akaudza vatori venhau kuti Saudi Arabia neBahrain vabvumirana kuvhura matenga avo kuitira ndege nekubva kuIsrael.
NeChishanu, King Hamad bin Isa Al Khalifa weBahrain akazivisa kubvuma kubatana neChipiri kusaina chibvumirano cherunyararo cheUAE-Israeli. UAE neBahrain ichava yechitatu neyechina nyika dzeArabhu, zvichiteerana, kugadzirisa hukama neIsrael.
Munguva yakapfuura, chete Egypt neJorodhani ndivo vakave nehukama hwepamutemo neTel Aviv, asi kunyangwe muQatar Israel mahofisi ekutengeserana anoshanda muchivande anga aripo kwemakore.